प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोश : आजपनि रातो कार्पेटमा हिँडे कोही फोटो खिच्न आएनन् त ! – Etajakhabar
प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोश : आजपनि रातो कार्पेटमा हिँडे कोही फोटो खिच्न आएनन् त !
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई असफल पार्न विभिन्न भ्रमहरु फैलाउने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन् । विहीवार विश्व जनसंख्या दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केही तत्व सरकारविरुद्ध भ्रम फैलाउन लागिपरेपनि सरकार आफ्नो काममा अघि बढिरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा हिलोमाथि रातो कार्पेटमा हिँडेको विषय समाचार बनेको प्रतिपनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘हिजो हिलो छोप्न कार्पेट राखेका रहेछन् । हिजो पनि र आज पनि म रातो कार्पेटमा नै हिँडे ओलीले भने, ‘तर आज रातो कार्पेटमा हिँडेको फोटो खिच्न पत्रकार आएनन् ।’ यो समाचार योजनाबद्ध रुपमा आएको ओलीको भनाइ थियो ।
उनले आफू प्रधानमन्त्री बन्नु भन्दापहिलादेखि नबनेका बाटो हिलो हुँदा पनि सरकारलाई नै दोष दिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । अर्को प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण रोक्न भारतीय दूतावासबाट आएको पत्रका बारेमा आफूलाई जानकारी नदिएको बताए ।
भारतीय पक्षले विभिन्न ठाउँमा कुटनीतिक प्रयास गर्दा पनि आफूलाई जानकारी नदिनुले आफू लज्जिलत हुनपरेको र यसप्रति आफू क्षमाप्रार्थी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले यसबारे बुझ्ने बताए । ‘यो जानाजान भएको हो या लापरवाहीका कारण हो थाहा भएन यसबारे म बुझ्नेछु ’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
Posted on: Thursday, July 11, 2019 Time: 12:26:49